Faha 120 taona nahaterahan’i Victoire Rasoamanarivo any an-danitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny 21 aogositra 1894 no nodimandry i Victoire Rasoamanarivo. Ho an’ny Fiangonana dia varavarana idirana amin’ny fiainana mandrakizay ny fahafatesana. Izany indrindra àry no ilazana fa feno 120 taona amin’ity 2014 ity ny nahaterahan’i Victoire Rasoamanarivo any an-danitra.
Vanim-potoana lehibe, tsy avelan’ny Fiangonana handalo fotsiny ity tsingerin-taona ity. Tohizina ny vavaka totoafo fangatahana ny hananganana azy ho olomasina. Hotsarovana amin’ny fomba manokana ireo daty nanamarika ny fiainany (jereo ny tondro etsy anila), ka hetsika toy ny fanaovana mariazy miara-mizotra, ohatra, no hanamarihana ny daty nanaovana mariazy azy sy Radriaka vadiny.
Tsiahivina fa ny 30 avirily 1989, tao Antsonjombe Antananarivo, no nambaran’ny Papa Joany Paoly II fa olontsambatra i Victoire Rasoamanarivo. Tonga teto Madagasikara tokoa manko ny Papa tamin’izany. Tsy hohadinoina eo amin’ny tantaran’ny Fiangonana sy ny Firenena io vanim-potoana io.
Eny Andohalo, eo anoloan’ny Katedraly, no misy ny lasapely mirakitra ny taolambalony. Misokatra ho an’ny rehetra io toerana io ary mandritra ny herinandro (afa tsy ny alahady) dia misy ny Sorona masina isa-maraina. Kristianina maro –Malagasy sy vahiny– no tonga mivavaka eny isan’andro. Amin’ny toerana fivahinianana masina toy itony moa dia ao ireo mandeha irery, ao koa ireo tonga miaraka maromaro: fianakaviana, paroasy, fikambanana masina isan-tsokajiny, sns. Tsy ary ho sahala avokoa ny antony ahatongavana eny, fa ny azo lazaina dia ny vavaka no itoviana. Ny fahafantarana ny fahamasinan-toetran’i Victoire no angatahana ny fanampiany am-bavaka.
Efa nisy ny boky nivoaka nitantara ny fiainan’i Victoire Rasoamanarivo. Taloha kelin’ny nanambarana azy ho olontsambatra dia efa vita tantara an-tsary izany, ho mora azon’ny rehetra izy io. Nisy koa ny tantara an-tsehatra sy ny fomba maro hafa nampahafantarana azy. Raha aravona dia nanana hatsaram-panahy nampitolagaga ireo niara-niaina taminy i Victoire Rasoamanarivo. Nanankina ny fiainany tamin’Andriamanitra ary nino sy natoky an’i Jesoa. Tsy nitsahatra nangata-bavaka tamin’i Masina Maria. Tia ny manodidina azy izy, indrindra fa ireo madinika sy mahantra. Nanaja ny tokantranony hatramin’ny farany ihany koa. Modely faka tahaka teo amin’ny fandraisana andraikitra amin’ny maha kristianina. Tamin’ny fotoana nandroahana ny Misionera, noho ny ady teo amin’i Frantsa sy Madagasikara, dia izy sy ny namany tao amin’ny Union Catholique no niankinan’ny Fiangonana. Hagagana ny an’ny Misionera rehefa tafaverina teto Madagasikara indray satria Fiangonana niroborobo no novantanin’izy ireo.
An’ i Madagasikara manontolo
Na dia ny diosezin’Antananarivo aza no nipoiran’i Victoire Rasoamanarivo dia ny Fiangonana eto Madagasikara no manan-jara fa manana olontsambatra lahika toa azy. Ho an’ny diosezy rehetra manerana ny Nosy araka izany ity fankalazana ity. Ireto misy vavaka voaoman’ny mpikarakara hatao isam-bolana mandritra ity taona ity:
mba hampitombo finoana ny fanajana an’i Victoire
Febroary: ho fanilo amin’ny manodidina azy ireo lahika mandray andraikitra
Marsa: mba hiaina tsara ny maha kristianina azy ny loham-pianakaviana
Avrily: ho an’ny renim-pianakaviana misedra olana sy voahitsakitsaka ary nilaozam-bady
Mey: ho voahaja ny hasin’ny mariazy ary ho betsaka ny hiroso ireo mbola anaty tokantrano maso
Jona: ho an’ny tanindrazana
Jolay: ho an’ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora
Aogositra: ho an’ny fiantsoan’Andriamanitra sy ny Fiangonana
Septambra: ho an’ireo olona manana fahasembanana sy ory ary mijaly, sy ireo any am-ponja
Oktobra: fitiavana manokana an’i Masina Maria sy ny Raozery masina
Novambra: ho an’ireo nody mandry
Desambra: ho an’ny fikambanana sy ny vaomieran’asan’ny Fiangonana
Ireo daty nanamarika ny fiainan’i Victoire Rasoamanarivo teo amin’ny fizorany tamin’ny finoana
17 Janoary 1864: Komonio Voalohany
14 marsa 1888: nanao Batemy ankamehana an'i Radriaka izy, mialoha ny hahafatesan’ity vadiny
20 avrily 1868: maty tampoka ny reniny
30 avrily 1989: nambaran’ny papa Joany Paoly II izay tonga teto Madagasikara ho olontsambatra izy
13 mey 1864: mariazin’izy sy Radriaka
18 aogositra 1894: narary izy
21 aogositra 1894: nodimandry izy
22 aogositra 1993: nafindra tao amin’ny Chapelle ao Andohalo izy
6 septambra 1876: filohan’ny ZMM (Zanak’i Masina Maria) voalohany izy
11 septambra 1864: Fankaherezana
1 novambra 1863: Batemy